Nagu saabsan | Waxyaabaha Badbaadinta Shakhsiyeed
Shirkadda Unidus (HK) waa soo saare horseed u ah galoofisyo tayo leh iyo alaabooyin kale oo ilaalin shakhsi ah. Khibradayada aan u siineyno badbaadada warshadaha, nadaafadda, adeegga cuntada, ka shaqeynta cuntada iyo suuqyada caafimaadka ayaa ku baahsan adduunka. Waxaan u habeyn doonnaa adeegyadeenna si aan ula jaanqaadno ujeeddooyinkaaga, annaga oo ku darnaay aragti qiime leh oo, oo ay weheliso xulkeenna dhammaystiran ee alaabooyinka 'PPE' ka sarreeya, waxay sare u qaadi doonaan iibkaaga. Laga soo bilaabo hal kiis kiis illaa weel buuxa, waxaan awood u leenahay inaan kulano oo aan dhaafno dhammaan baahiyahaaga.
HELI KARO 24/7
Furan saacad walba si ay kuugu sahlanaato, si dhakhso leh oo fudud
Waxaan daboolaynaa qiimaha dhoofinta adduunka oo dhan amarrada Jumlada.
Kooxdayada Injineerada Caafimaadka ee Kartida leh waxay had iyo jeer ka shaqeeyaan hagaajinta alaabtayada.
Waxaan bixinaa adeeg hubaal ah iibka kadib
ku soo dhawow aaga gacmo gashi
Waxaan ku takhasusnay Alaabada Gacmo gashi ee la tuuro, Alaabada Qoyska & Wax soosaarka Warshadaha. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan soo saarnay waxaa ka mid ah galoofyada Imtixaanka Latex, Galoofisyada Imtixaanka Nitrile, Gacmo-gashiyada Vinyl, Gacmo-gashiyada Qalliinka, Gacmo-gashiyada Reerka ee Latex, Gacmo-gashiyada Warshadaha, Gacmo-gashiyada PE, PE (duubbada, daboolida kabaha iyo gacmaha), Maaskarada aan tolnayn, Maro-xidhka (koofiyadaha, kabaha daboolka iyo dharka) iyo kuwa kale.
Adeeggeennu wuxuu ku saleysan yahay tayo sare & hufnaan sare.
Aragtidayada "Macaamiisha ha guuleystaan ​​marka hore, ka dibna waan guuleysan doonnaa"
Hadafkeenu "Caafimaad Wanaagsan, Badbaadada koowaad iyo Daacadnimo"
Iibi in kabadan hal bilyan oo galoofis ah sanadka 2020
Just Gloves waxaa iska leh oo maamula Unidus kuwaas oo gebi ahaanba u heellan wadarta qanacsanaantaada. Haddii aad hayso wax soo-jeedin ama faallooyin ah ama haddii aad u baahan tahay inaad nala soo xiriirto, fadlan email noo soo dir. Waxaan rabnaa inaad haysato adeegga macaamiisha ee ugufiican sidaa darteed waxaan haynaa koox iibiya saaxiibtinimo oo diyaar u ah inay kaa caawiyaan wixii su'aal ama su'aal ah.Ama haddii kale, la xiriir wechat / whatsapp